हो, म कमलरी थिएँ, तर माधव नेपालको कुकर्म पछि लाग्न सक्दिनँ : शान्ता चौधरी - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
हो, म कमलरी थिएँ, तर माधव नेपालको कुकर्म पछि लाग्न सक्दिनँ : शान्ता चौधरी
काठमाडौं, ६ भदाै ।
नेकपा एमालेकी सांसद शान्ता चौधरीले पार्टी फुटाउने जस्तो कुकर्म गर्ने नेता माधवकुमार नेपालको पछि लाग्न नसक्ने बताएकी छन्।
आफूलाई एमालेमा प्रवेश गराउने नेता नेपालकै विरोधमा उत्रिएको भन्दै आलोचना भइरहँदा सांसद चौधरीले पार्टी छाडेर कसैको पछि लाग्न नसकिने अडान लिएकी हुन्।
उनले नेता नेपालले सूर्य चिन्ह हाम्रै हो भनेर सिकाएको बताउँदै तर अहिले पार्टी फुटाउने उनको काममा आफू संलग्न हुन नसक्ने पनि स्पष्टीकरण दिएकी छन्। १८ वर्ष लामो समय कमलरी जीवन बिताएकी उनलाई नेता नेपालले एमालेमा प्रवेश गराएका थिए।
‘म कमलरी थिएँ , जमिन्दारको घरमा भाँडा माझेर १८ वर्ष बिताएको थिएँ। यसबारे मैले धेरै बताइरहनु पर्दैन। तर म बिगतमा जति अपमानित भएँ , हेपिएँ सायद मुक्त भएपछि कहिल्यै अपमानित हुनु पर्दैन, यही सोच्ने गर्थें’, उनले भनेकी छन्, ‘तर आज पनि मैले बोल्नेबित्तिकै तँ कमलरी होस नबोल्, मैले लेख्नेबित्तिकै तँ कमलरी होस् नलेख् भन्ने आसयबाट प्रतिक्रिया आउन थाल्छ।’
उनले यो अवस्थामा अझै पनि केही मानिससको दिमाग सामन्तवाद जिउँदै रहेको महसुस भएको बताएकी छन्। ‘कहिलेकाहीँ मान्छेका मस्तिष्कमा अनि मनमा गढेको सामन्तवाद जिउँदै रहेछ जस्तो लाग्छ’, चौधरीको गुनासो छ, ‘शोषणको दनदनी दन्किएको आगोमा जल्दाको पीडा कस्तो हुन्छ भन्ने अनुभूति गरेकाले होला यस्ता अभिव्यक्तिले मलाई ग्लानी होइन, ऊर्जा थपेको हुन्छ।’
आफूले कहिल्यै पनि नेता नेपालको अपमान नगरेको पनि उनले स्पष्टीकरण दिएकी छन्। ‘मैले कमरेड माधव नेपालको अपमान कहिले गरेँ? एकपटक कसैले बताउन सक्नुहुन्छ?’, उनले सोधेकी छन्, ‘सक्नुहुन्छ भने बनाइदिनुस्। उहाँ आफैँले आफ्नै पार्टीको सरकार गिराउनुभयो। आफैँले बनाएको पार्टी चोइट्याएर सारा नेपालीको भावनाविपरीत पार्टीलाई तहसनहस पार्दै हुनुहुन्छ।’
उनले पार्टी चोइट्याएर नेपालले कुकर्म गरेको पनि बताएकी छन्। ‘अब म के गरौँ ? यस्ता जनभावनाविपरीतका कुकर्मका पछि लागौं ? लाखौ कार्यकर्ताको मनमा चोट पुग्ने गरी कसैका पदको लडाइँको पछि दगुरौँ?’, उनको प्रश्न छ, ‘यदि देशलाई स्थिरता दिने हो र कम्युनिस्ट आन्दोलन समाजवादउन्मुख बनाउने हो भने यस्ता कार्यको मैले विरोध गर्नै पर्छ। मैले त्यही गरेँ र अझै पनि गरिरहने छु।’
नेता नेपालसहित १४ सांसदले वैशाख २७ गते पार्टी ह्विप उलंघन गरेको भन्दै एमालेले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर एमालेको उक्त निर्णय सभामुख अग्नि सापकोटाले कार्यान्वयन गर्न मानेका छैनन्।
यस्तोमा प्रतिनिधिसभामा एमाले दलकी सचेतकसमेत रहेकी चौधरीसहितका सांसदहरु नेपालसहितका सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस्न माग गर्दै दुई पटक सभामुखकहाँ पुगिसकेका छन्।
तर सभामुखले छलफल भइरहेको भन्दै टारेर पठाइरहेका छन्। यसअघि माओवादी र जसपा सांसदमाथिको कारबाही तत्कालै कार्यान्वयन गरेका उनले एमालेको हकमा फरक व्यवहार देखाएपछि सांसद चौधरीसहितले दबाब दिइरहेका छन्।
चौधरीले पनि दबाब दिएपछि आफूलाई एमालेमा प्रवेश गराउने माधव नेपालविरुद्ध नै लाग्ने भन्दै आलोचना र विरोध भएपछि यस्तो स्पष्टीकरण आएको हो।